Xarunta Denizli Ski Center ayaa u qulqulaya booqdeyaasha | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean20 DenizliXarunta Denizli Ski Center ayaa ku qulqula booqdayaasha
07 / 01 / 2020 20 Denizli, Turkish Aegean, GUUD, TURKEY, TELPHER
martida barafka lagu dalxiis tago ee la dalxiis tago
Jannada cad Pamukkale waxaa ku xiga jannada labaad ee cadcad ee magaalada, Xarunta Denizli Ski Center, booqdayaasha booqdayaasha usbuuca dhammaadka. Xarunta Denizli Ski Center, oo ah tan ugu jecel ee dadka jecel barafka, waxay qaadaysaa talaabooyin adag si ay u noqoto meesha ugu doorka badan ciyaaraha xilliga qaboobaha.
Xarunta Denizli Ski Center, oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli, ayaa soo booqdeysay martida usbuuc dhammaadka. ciyaaraha Winter ayaa marti ugu doorbiday horumarinta la talaabooyin adag dhinaca noqday mid ka mid ah hiwaayadda iyo xirfadeed ee ku orda hoose iyo snowboarders oo doonaya in ay dhirta ka imanaya magaalooyin badan in Turkey. Xarunta Denizli Ski Center, oo ay ka buuxaan dadka doonaya inay ku raaxaystaan ​​barafka iyo barafka barafka iyaga oo og fursad u furan hawada dhamaadka usbuuca, ayaa kahelay calaamadaha buuxa martidooda oo leh dabaqyo ku habboon iyo tas-hiilaad farsamo oo loogu talagalay bilowga, dhex-dhexaadka iyo kabaha wanaagsan. Xarunta ugu weyn ee barafka Aegean, oo leh awooda lagu daboolo baahiyaha oo dhan tas-hiilaad maalmeedka, waxay siisaa faa iido weyn in lagu dul boodboodo qaab dhismeedka bulshada iyo muuqaalka "dhaldhalaalka" ee barafka meelaha yar ee adduunka.
"Denizli wuxuu sameyn doonaa magac laftiisa dalxiis jiilaalka"
Duqa Magaalada Denizli ee Magaalo Weyn Cusmaan Zolan ayaa sheegay in barafku hada uusan u aheyn shisheeye Denizli wuxuuna yiri, dık Waxaan siineynay xarun aad u qurux badan oo dalxiiskeena ah marka loo eego dalxiiska jiilaalka. Xaruntani waxay u adeegtaa maahan magaaladayaga oo keliya laakiin waxay sidoo kale u adeegtaa soo booqdeyaashaada dalka oo dhan. Marka laga soo tago jannada cad ee Pamukkale, Denizlimiz ayaa sidoo kale caan ku ah dalxiiska jiilaalka. Waxaan sidoo kale ku bixinnaa koorsooyinka barafka ah halkan. Waxaan rajeyneynaa halkaan inay matali doonaan ciyaartooyda matalaya badda hoosaadkayada iyo dalkeena, ”ayuu yiri.
Nagalaso digniinta: deniz www.denizlikayak.com ”
Dhammaan macluumaadka iyo ogeysiisyada ku saabsan Xarunta Denizli Ski Center waxaan www.denizlikayak.co, "Denizli Ski Center" bogga facebook iyo "denizlikayakmerkezi.20" xisaabta instagram ayaa la raaci karaa iyada oo xoogga la saarayo ahmiyada, geedka ayaa la xiray 06 Janaayo 2020 Isniintii sababo la xiriira baraf culus.
Degmada Denizli ee Tavas ee ku taal xaafada Nikfer oo 2 kun iyo 420 mitir u jirta Bozdag'da Denizli Ski Center, 75 kiilomitir u jirta bartamaha magaalada. Xeebta ugu weyn ee Aegean ayaa leh 13 garoon oo leh dherer dhan 9 kiiloomitir. Hiwaayadda hiwaayadda iyo xirfadleyda xirfadleyda iyo baraf-barafleyda doonaya inay sameeyaan dhammaan noocyada tas-hiilaadka ee xarunta, oo ay ku jiraan 2 kursi, 1 kursi iyo suunka socodka.
Olympos Teleferik waxay soo gaadheen dad soo booqday
Xarunta Paladöken Ski Center waxay daadad gelisay dalxiisayaasha Iran
Xarunta Nemrut Ski-ga waxaa ka soo jeeda qoob-ka-ciyaaro
Elmadağ Ski Center waxaa lagu duulay inta lagu jiro fasaxa sanadka Cusub
Xerada Kayse Mountain Resort waxaa laga helaa Dhamaan Lausanne iyo Visitors
Güzeltepe, Loogu Dhufay Lovers Laus
Booqdayaasha Raid ee Dekedda Baabuurta Denizli iyo Bağbaşı
Buuraleyda Mount Erciyes ee fasaxa fasaxa
Bogga facebook bogga Denizli Ski Center